▷ Heshiisyada joodariga internetka ee Isniinta tooska ah: Waxaan la soconaa qiimo dhimista ugu weyn sanadka marka ay hoos u dhacaan - 【Isbarbardhigga】 2022
Heshiisyada joodariga internetka ee Isniinta tooska ah - Waxaan la soconaa qiimo dhimista ugu weyn sanadka marka ay hoos u dhacaan
Qiimuhu ma tilmaamayo tayada joodariga.
Tifaftirayaashayada hurdada, Claire Davies, waxay haysaa qaar ka mid ah talooyin waxtar u leh qof kasta oo raadinaya inuu iibsado furaash cusub. Waxay tidhi:
"Haku tiirsanaan qiimaha oo kaliya tilmaame tayada, sababtoo ah joodariga ugu qaalisan macnaheedu maaha inuu yahay kan ugu fiican. Dhanka kale, joodariga aadka u jaban kuma taageeri doono si ku filan waana in goor hore la bedelaa. hadda ka dib, samaynta dhaqaale been ah '.
"Talada ugu fiican waa in aad soo iibsato furaash leh ugu yaraan 30 habeen oo tijaabo ah si aad naftaada u aragto in ay la qabsanayso jidhkaaga iyo qaabka hurdadaada."
Nectar waxay leedahay mid ka mid ah muddada tijaabada ugu dheer ee warshadaha - waxaad haysataa sanad dhan si aad u go'aansato haddii aad jeceshahay (Sawirka credit: Nectar Sleep) 2021-11-28T20: 25: 19.370Z
18-ka ugu fiican ee joodariga internetka ee Isniinta ugu fiican waqti ka hor
Saacado gudahooda ee bilawga rasmiga ah ee Cyber ​​​​Isniinta, halkan waxaa ah hoos u dhigista iibka joodariga Cyber ​​​​Isniinta ee ugu sarreeya ee hadda ku nool Maraykanka:
Cyber ​​​​Isniinta, waa mid ka mid ah waqtiyada ugu jaban ee la iibsado joodariga
Waxaan la socday qiimaha joodariga dhawrkii sano ee la soo dhaafay, waxaana jira laba jeer sanadka oo ay hoos ugu dhacaan heerarka ugu hooseeya ee Maraykanka: dabayaaqadii Noofembar, inta lagu jiro Jimcaha Madoow iyo Cyber ​​​​Isniinta. . iyo bishii Febraayo, intii lagu jiray xiisadda fasaxa ka dib, markaas oo tafaariiqlayaasha furaashyadu ay si quus ah isugu dayeen inay dadka dib u bilaabaan kharashaadka. (Fiiri Febraayo haddii aadan i rumaysan, qiimaha Jimcaha Madoow ayaa soo laabanaya.)
Markaa haddii aad ka fekereyso inaad iibsato joodari cusub hadiyad fasax ahaan (iyo sababta aan), hadda waa wakhti fiican oo sidaas la sameeyo. Heshiisyada joodariga Cyber ​​​​Isniinta kama fiicna Jimcaha Madow, inta badan heshiisyada waa la cusboonaysiiyay, laakiin waa qiimo dhimista ugu weyn sanadka.
Mid ka reeban kan waa Purple, kaas oo lagu yaqaanay inuu hoos u dhigo qiimaha joodariyadiisa € 50 oo dheeraad ah ilaa € 100 dheeraad ah Cyber ​​​​Isniinta. (Waan daawaneynaa si aan u aragno inay taasi mar kale dhacdo berrito.)
Galab wanaagsan, halkan Julia. Waxaan u galayaa inaan ka warbixiyo heshiisyada joodariga Cyber ​​​​Isniinta ee sanadkan. Waxaan muujin doonaa heshiisyada ugu fiican, iyo runtii heshiisyada Cyber ​​​​Isniinta ee sida ugu wanaagsan looga fogaado, markaa la soco.